နနွင်းမှုန့် Archives - Factcrescendo Myanmar
Fact Check: ကွမ်းရွက်၊ နနွင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆားရောနှောစားရင် ကိုဗစ်ပျောက် သလား-အထောက်အထားမရှိပါ
July 20, 2021 July 20, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ကွမ်းရွက်၊ နနွင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆားရောနှောစားရင် ကိုဗစ်ပျောက် သလား-အထောက်အထားမရှိပါ
ကွမ်းရွက်ကို နနွင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆားရောပြီး စားရင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပျောက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေက မျှဝေလျှက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား Fact Crescendo အနေနဲ့ မတွေ့ရပါဘူး။ “သတင်းကောင်းပါ…နောက်တမျိုးဆေး ကိုဗစ်ဖြစ်နေသူရော…ကိုဗစ်ကာကွယ်သူရော အထူးဆေးရ ပါပြီ. …အခုနည်းပြထားတဲ့…အတိုင်းပြုလုပ်ပါ……ဆား…စနွန်းမှုန့်….ကြက်သွန်ဖြူ…..အဲဒိသုံးမျိုးကိုထဲ့ပြီး….စားပါ….အရည်ကို…..မျိုချပါ…..မနက်…တစ်….နေလယ်…တစ်…ညတစ်ခါ…တစ်နေ့…..သုံးချိန်မီဝဲသုံးဆွဲပါ ကြာကြာ ငုံပြီး….အရည်ကိုမျိုချပေးရင်…ပို၍ ထိယောက်ပါတယ်…….. ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့……ပြုလုပ်ပါ…. ကိုဗစ်ရောဂါ………၃…ရက်ဆို….ပြောက်ကင်းပါသည်……၃..ရက်ဆို….ပိုးသေသွားပြီ တကယ်သေခါပေါက်… ပိုသေတယ်ဗျ…”စသည်ဖြင့် ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို “Kyaw Htet Naing”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူက အောက်ပါအတိုင်းမျှဝေထားပါတယ်။ ပျံ့နှံ့မှူအားကောင်းတဲ့ တူညီတဲ့ အရေးအသားနဲ့ ဖြန့်ဝေမှုတွေကို ဒီနေရာ၊ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာ လည်းတွေ့ ရပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(World Health Organization- […]
Fact Check: အင်းစိန်ထောင်မီးလောင်ပြီး အကျဉ်းသားတွေထွက်ပြေးတဲ့ သတင်းတုသတင်းမှား အင်းစိန်ထောင်မီးလောင်ပြီး အကျဉ်းသားတွေ ထွက်ပြေးတယ်လို့ ရေးသားပြီး ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာ၊ ယ... by Zun Zee